Bit By Bit - Ukubuza imibuzo - 3.6 Uphando olunxulumene nemithombo yolwazi emikhulu
Ukudibanisa uphando kwimithombo emikhulu yolwazi kukuvumela ukuba uvelise iingqikelelo ezingenakwenzeka kunye nomthombo wolwazi ngamnye.
Uninzi lweengxelo zimileyo, imizamo yodwa. Abayakheli komnye nomnye, kwaye abayisebenzisi yonke enye idatha ekhoyo kwihlabathi. Oku kuya kutshintsha. Kukho okuninzi okunokufunyanwa ngokudibanisa idatha yenkwenkwezi kwimithombo enkulu yedatha echazwe kwisiqendu 2. Ngokudibanisa le mibini yeenkcukacha, kaninzi kunokwenzeka ukwenza into eyayingenakwenzeka kumntu ngamnye.
Kukho iindlela ezimbalwa ezahlukeneyo apho idatha yolwazi ingabandakanywa nemithombo enkulu yedatha. Kule candelo, ndiza kuchaza iindlela ezimbini ezibalulekileyo kwaye zizahlukileyo, kwaye ndiya kubabiza ngokuthi zicebise zicele kwaye zikhulise ukucela (umfanekiso 3.12). Nangona ndiza kubonisa indlela nganye ngomzekelo ogqithisiweyo, kufuneka uqaphele ukuba ezi ziyihotele eziqhelekileyo ezinokusetyenziswa kunye neentlobo ezahlukeneyo zedatha yophando kunye neentlobo ezahlukeneyo zolwazi olukhulu. Ukongeza, kufuneka uqaphele ukuba nganye yale mizekelo ingabonwa ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo. Ukucinga kwakhona kwiimbono kwisahluko 1, abanye abantu baya kujonga ezi zifundo njengemizekelo ye-"custommade" yedatha yokuphucula idatha "ekulungele" idatha enkulu, kwaye abanye baya kubajonga njengemizekelo ye-"readymade" enkulu yedatha yokuhlola idatha "yokugcinwa". Kufuneka ukwazi ukubona zombini imibono. Ekugqibeleni, kufuneka uqaphele ukuba le mizekelo icacisa njani ukuba uphando kunye nemithombo yolwazi emikhulu iyagqitywa kwaye ayiyi ndawo.
Umzobo 3.12: iindlela ezimbini zokudibanisa imithombo yemithombo emikhulu kunye nedatha yophando. Ukucela ngokucetyiswayo (icandelo 3.6.1), umthombo omkhulu wemithombo unomlinganiselo oyintloko wenzala kwaye ulwazi lophando lwakha umongo obalulekileyo malunga nawo. Ngokwandiswa ngokubuza (icandelo 3.6.2), umthombo omkhulu wemithombo ayinayo imilinganiselo engundoqo yomdla, kodwa isetyenziselwa ukukhulisa ulwazi lophando.